ကိုယ့်အကြိုက် – Giant's Web
© 2016. Powered by WordPress. Created by Zox Zin Min	ကိုယ့်အကြိုက်
← WordPress Banner အလွယ်တကူ ပြောင်းဖို့WordPress Locally →
4 comments on “ကိုယ့်အကြိုက်”	မောင်မိုး says:	March 25, 2010 at 12:41 pm	အံမယ်….ကိုယ့်ဆရာက မိန်းမတောင် ထည့်ရေးလိုက်သေးတယ်။ ဒီမယ် ကျူပ်က ၀ါသာနုတာဗျ။ ဒါပေသိ..အရည်အချင်းက ထိပ်တန်းမှာဗျနော်။
ZaunG says:	March 25, 2010 at 2:10 pm	ကွန်ပျူတာတွေနဲ့ အိမ်ထောင်နှစ်ဆက်တောင်ပါလား 😛
ဏီလင်းညို says:	March 25, 2010 at 8:01 pm	zox ရေ….
ဖိုးဂျယ် says:	March 25, 2010 at 11:12 pm	အကိုရေ